सूर्यकिरण श्रेष्ठ | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा सूर्यकिरण श्रेष्ठ
बीएचएम संयोजक, नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेण्ट (नाथम)
निजी कलेजहरूले लगानी बढाउनु आवश्यक छ
नेपालमा बीएचएम पढाइ हुने कलेजहरूको व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ?
हुन त शिक्षा समाजसेवाजस्तै विषय हो । तर, अहिले यो बढी व्यावसायिक हुँदै गएको छ । प्रतिस्पर्धा भएपछि गुणस्तर सुधार हुन्छ भन्नेमा म पनि विश्वस्त छु । तर, बीएचएममा आवश्यकताभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । हाम्रो बजारले नधान्ने खालको प्रतिस्पर्धाले माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिगारेको छ । त्यसले पनि हामीलाई गुणात्मक सुधार गरी बढी प्रतिस्पर्धी बन्न दबाब दिएको छ । राम्रोसँग काम जानेको छ भने कोही पनि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन ।
विश्वबजारमा नेपाली बीएचएम अध्ययन गरेकाहरूको माग कस्तो छ ?
दुबई, साउदी अरबलगायत खाडी राष्ट्रका व्यापारिक केन्द्रहरू नै हाम्रा मुख्य लक्ष्य हुन् । त्यहाँका ठूला चेन होटलहरूले नेपाली जनशक्तिको माग उच्चगतिमा बढाइरहेका छन् । त्यस्ता ठूला होटलका निर्देशक र प्रबन्धकहरू नै यहाँ आएर विद्यार्थीसँग अन्तरवार्ता लिने र नियुक्ति दिने गरिरहेका छन् । भारतबाट उत्तिकै माग बढिरहेको छ । हाम्रो आन्तरिक बजारको अवस्था कमजोर भए पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा माग बढ्दै जानु राम्रो हो ।
विदेशी होटलमा नेपालीहरूको माग बढ्नुको कारण के हो ?
हामी नेपालीहरूको संस्कार नै ‘अतिथि देवो भव’ हो । हामी प्राकृत रूपमै सत्कारमुखी छौं । नहाँसी बोल्दैनौं । अतिथिलाई आत्मैदेखि सत्कार गछौं । अर्को कुरा हामी कडा परिश्रम गर्न सक्षम छौं । हामीकहाँबाट विदेश जानेहरू धेरै अब्बल दर्जाका पनि छैनन् र तल्लो तहका पनि छैनन् । मध्यम खालको जनशक्ति विदेश जाने भएकाले उनीहरूको सेवासुविधा पनि मध्यम खालकै हुन्छ । उनीहरूले कडा मेहनत र इमानदारीका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छन् । त्यसैले, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपालीहरू मन पराइएका हुन् ।
नाथम र निजी कलेजहरूका उत्पादनमा के फरक पाउनुभएको छ ?
नाथम नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको एक मात्र कलेज हो । यहाँ होटल म्यानेजमेण्ट विषयको अध्यापन हुन्छ । यसले समाजमा आफ्नो बेग्लै छवि र ब्राण्ड बनाइसक्यो । नाथममा आउने विद्यार्थीले यहाँको शिक्षण शैली र प्रयोगात्मक तैरतरीकाहरू पनि बुझिसकेका हुन्छन् । हामीसँग प्रशस्त पूर्वाधार र लामो पनि अनुभव छ । त्यसैले, हामीले विद्यार्थीलाई उच्चस्तरको प्रयोगात्मक अभ्यास गराउँछौं । निजी कलेजहरूमा त्यो पर्याप्त हुन सायद समस्या होला । किनकि, उनीहरूको खर्चको सीमाले यसमा काम गरिरहेको हुन्छ ।
बीएचएम गरेका नेपाली विद्यार्थीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अन्य पेशाजस्तै होटल व्यवस्थापन पनि लर्न एण्ड वर्क (सिक्ने र गर्ने) पेशा हो । मानव जीवनमा सिक्ने क्रम असीमित हुन्छ । र, सधैं सिक्न उत्सुक मानिस नै अघि बढ्ने हो । त्यसकारण अहिले बीएचएम पास गरेर काममा लागेका व्यक्तिहरूले नै भोलिको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने निक्र्योल गर्छन् । जसले थप जान्न खोज्दैन, ऊ त्यतिमै सीमित हुन्छ । जो आफूलाई अद्यावधिक गर्दै जान्छ, ऊ भविष्यमा माथिल्लो तहमा पुग्छ । यसका लागि मेहनत, लगनशीलता र क्षमता विकास मुख्य शर्त हुन् ।
बीएचएम पढाइ हुने निजी कलेजमा विद्यार्थीको आकर्षण घटिरहेको छ भनिन्छ नि ?
कलेज खोलिसकेपछि सम्बन्धित विषयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नै चाहिन्छ । पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक सरसामानको अभावमा पढाइ राम्रो हुन सक्दैन । पढाइ राम्रो हुन दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । अहिले प्लस टू तहमा पढाइरहेका धेरैजसो शिक्षक दक्ष छैनन् । शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीले स्तरीय शिक्षा पाउन सक्दैन । यसैगरी हामीले विद्यार्थीलाई शुरूमा नै ठूलाठूला सपना देखाउनु हुँदैन । यथार्थमा आधारित भएर विद्यार्थीलाई उत्प्रेरणा दिने हो भने उनीहरूले यो विषयलाई निरन्तरता दिन्छन् । अहिले निजी कलेजमा व्यावसायिकताले जरो गाडेको छ ।
शुरूमा भर्ना गर्नेबेलादेखि नै ‘बार्गेनिङ’ चल्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कलेज सञ्चालक चाहेर पनि सही बाटोमा हिँडिरहन नसक्ने हुन सक्छ । किनकि, उसलाई कलेज नाफामै चलाउनु छ । यस्ता विभिन्न समस्याले निजी कलेजहरूलाई गाँजिरहेजस्तो मलाई लागेको छ । यद्यपि, कतिपय कलेज राम्रै तरीकाले चलिरहेका पनि छन् । समस्याबाट पाठ सिक्ने र त्यसको उचित समाधान निकाल्ने हो भने निजी कलेजप्रति पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सक्छ । यसका लागि कलेजहरूले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।